Uyidlulisela njani idatha yakho yezeMpilo kwi-iPhone entsha | IPhone iindaba
Ukugcinwa kwe-iOS kulungile kodwa ... Kuthekani ukuba ekuphela kwento esifuna ukuyithumela kwisixhobo sethu esitsha yidatha yezempilo ngaphandle kokubuyisela i-backup?, isisombululo silula kunokuba sivakala. Xa sifumana i-iPhone entsha sihlala sithanda ukuqala ekuqaleni, ngaphandle kokufaka iikopi zokugcina, ukonwabela amava e-iOS acocekile kwaye azinzile kangangoko, ngaphandle kokurhuqa iingxaki zangaphambili okanye kuba nje sifuna ukudibanisa isixhobo sethu esitsha ngelixa silungiselela inkqubo yonke kwaye ukhuphele usetyenziso lwethu. Nangona kunjalo, enkosi kwinkqubo entsha siya kuba nakho ukuhambisa ulwazi lwethu lwezeMpilo ngaphandle kokusebenzisa ikopi yogcino lwe-iPhone kwaye ke, ngaphandle kokurhuqa idatha esingayifuniyo, kuphela kwezi.
Le nkqubo ibizwa ngokuba Ukutshintshwa komsebenzi weDecipher kwaye sisibonelelo sasimahla se-OS X kunye neWindows, esivumela ukuba sikhuphe kuphela idatha yezeMpilo kunye neMisebenzi kwindawo yogcino esiyigcinileyo kwi-iTunes ngendlela ebhaliweyo yokufaka kamva yonke le datha kwisixhobo esitsha se-iPhone ngaphandle kwengxaki ezingaphaya . Uluvo kukuba singasisebenzisa isixhobo ukufaka kuphela loo datha, kwaye sikwazi ukushiya yonke i-iPhone yethu entsha okanye i-iPhone ibuyiselwe icocekile ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, koku siza kuyidinga iApple Watch kunye nesipele sayo, kuba olu tshintsho lwedatha luluncedo ngakumbi kwabo basebenzisa iApple Watch kwaye banedatha enkulu yezeMpilo egcinwe kuyo.
Khuphela inkqubo kwi OKU unxibelelwano
Ungayilungisi i-Apple Watch yakho (eya kuthi yenze ukhuphelo lwedatha yakho yezeMpilo).
Qhagamshela i-iPhone yakho kwi-iTunes kwaye wenze indawo yogcino ebhaliweyo.
Vala iTunes emva kokukopa kunye nokwazisa usetyenziso olukhutshelweyo.
Cofa uqhubeke nokudlulisa, khetha ifayile ofuna ukuyidlulisa kwaye ucofe ku "decrypt".
Ngoku usetyenziso lwezeMpilo lunedatha, ukuze uphinde ubhangqe iApple Watch ongayilinganisanga kwi-iPhone yangaphambili.
Ngoku ungonwabela yonke idatha yakho yezeMpilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Uyidlulisela njani idatha yakho yezeMpilo kwi-iPhone entsha ngaphandle kokubuyisela
Ndineentsuku ezimbini emva kwexesha, ndineentloni, ndibabuze kwivenkile yeApple kwaye abayazi ukuba bangenza njani, sele ndizicimile zonke iirekhodi zeApple Watch nezinye. Ndisabulela kakhulu ngegalelo.
UPaloma Maria sitsho
Kububudenge kwakhona ukuba iApple isenza ukuba sibhenele kwezi ntlobo zineendlela eziyindinisa endaweni yokubonelela ngesisombululo esilula
Phendula kuPaloma Maria
Ungasusa njani isatifikethi seengcambu kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad